BokaSolver: Zivisa AI uye NLP MuMusika Ongororo | Martech Zone
Kana iwe wakambogadzira ongororo uye uchitarisira kuwana huwandu uye huwandu hwezviwanikwa kubva kumhinduro, unonzwisisa kuti zvakaoma sei kunyora mibvunzo. Verbiage, chimiro, uye girama yaunobvunza zvinogona kutungamira kumhedzisiro inozotungamira kutsvagurudza kwako.
Semaneja wechigadzirwa, ndakamhanyira mune izvi zvakawanda nemapoka ekutarisa. Dai ndanga ndichiyedza nyowani mushandisi interface, kukumbira mhinduro kunogona kuita kuti mugashiri atarise chinongedzo kuti aedze kutsvaga chimwe chinhu chakashata… kunyangwe ichiti inogona kunge yakagadzirwa zvakanaka. Kana ndikabvunza kana paine chinhu chakaoma kana kana chimwe chinhu chisipo, mushandisi anobva atarisa ipapo dambudziko… izvo zvinogona kunge zvisipo.
Panzvimbo iyoyo, isu takangobvunza mushandisi kuti atore chiito uyezve atsanangure mafambiro avaiita nezve chiitiko ichi. Kunyangwe izvi zvakabvisa chero kusarudzika, zvaida yakawanda yekuposita ongororo kuyera mhedzisiro mukufungidzira kwemhando yepamusoro kana kurudziro. Mhedzisiro iyi yaigara iri iyo kufungidzira kwakanyanya… Kwete a mhedzisiro inoshanda mhedziso.
Maitiro Echisikirwo Mutauro Kugadziriswa uye Kudzidza Kwemuchina
Dzimwe dzedzidziso dzakapfuma kwazvo, dzeshanduko dzinobva mukubvunza mibvunzo yakavhurika. Sei muenzaniso wakakwana. Asi mhinduro ku sei haisi manhamba, mabhinari, kana sarudzo mhinduro… saka zvagara zvichinetsa kuwana mhedzisiro uye nehunhu zvaunoda kubva pakubvunza mibvunzo yakavhurika kutungamira sarudzo dzebhizinesi.
Ndinofara, kugadzirisa mutauro mutauro (NLP) uye machine learning (ML) inogona kukunda idzi nyaya! Nokubatanidza kudzidza kwemuchina nehungwaru hwevanhu, BokaSolver musika wekutsvagisa tekinoroji chikuva icho chinoshandisa huchenjeri hwekunyepedzera kubvunza nekusimbisa hunhu pamwe nemibvunzo yakawanda muongororo dzepamhepo.
BokaSolver rinokwana pakati pemapuratifomu ekuzviitira-iwe-wega, akadai seSurvey Monkey neGoogle Ongororo, uye makambani ekutsvagisa-akazara, seMcKinsey & Kambani neAccenture.
Chii chinoita kuti GroupSolver ipatsanuke maitiro avo ekugadzirisa mhinduro dzemitauro, vachishandisa:
Boka Renjere - Vapindura vanopindura mibvunzo yakavhurika mumazwi avo, vobva vabatana.
Machine Learning - Mhinduro kubva kumibvunzo yakavhurika dzinoongororwa neanoshandura ine simba uye yekuzvigadzirisa.
Yakawedzera Statistics - chikuva chinogonesa mhinduro dzemitauro yechisikigo uye chinoenzanisira maonero ehunhu.
BokaSolver Zvishandiso Sanganisira
AI Akavhurika Mhinduro ™ - Nokubatanidza kudzidza kwemuchina nehungwaru hwevanhu, GroupSolver inoronga nekugadzirisa mhinduro dzakavhurika. Hapana rovedzo yedata, hapana munhu anoenzanisa, uye hapana yemahara-zvinyorwa zvekodhi zvinodiwa.
IdeaCluster ™ - IdeaCluster inoratidza kuwirirana pakati pemhinduro dzakavhurika dzoga-dzoga. Zvinobatsira chose pakuvaka vatengi manas kana kutaura nyaya yemhando. Ndizvozvo - BokaSolver rakasunungura kuwirirana uye kudzokorodza mamodheru kubva pahukama hwakasarudzika nehuwandu hwe data.
IntelliSegment ™ - IntelliSegment chinhu chakangwara chekupatsanura chishandiso chinogona kukubatsira iwe kunzwisisa kuti mhinduro dzemibvunzo yakavhurika dzinosiyana sei kune chaiwo mapato anopindura. Zvakafanana nekutsvaga nyaya mudura.
IdeaCloud ™ - IdeaCloud ndeye yakakwenenzverwa uye yakasimudzwa mharidzo yemhinduro dzakatsigirwa kwazvo kumubvunzo wakavhurika. Fonti hombe inoratidza mhinduro nerutsigiro rwepamusoro pakati pevakapindura. Fonti diki ndeye… tsime, mhinduro dzisina kunyatsoita kuti zviitwe.
Kubvumirana Solution ™ - Kubvumirana Solution iseti yemhinduro dzakatsigirwa dzakabatana chaizvo. Iyo inoratidza mhinduro dzinowirirana mushe uye dzinoita chibvumirano chekubvumirana pakati pevapindura.
Sarudzo dzinopindura - Kunze kwekuve chingwa uye bota rekutsvagurudza, mhinduro kumibvunzo-yesarudzo dzakawanda dzinogona kubatsira mukuvaka zvikamu zvevanopindura kuti vawane ruzivo rwakawanda. Isu tinozvichengeta zviri zvitsva uye zvakagadziridzwa mune chaiyo-nguva.
Dhata Yekunze - Kana iwe watounganidza ruzivo nezve vako vakapindura, iwe unogona kuiisa kune yedu dashibhodhi. Iishandise kucheka GroupSolver dhata kana kuvaka nyowani dzinopindura zvikamu.
Mhinduro Manager - Tarisa kuti vanopindura vanopindura sei mibvunzo yako mune chaiyo-nguva. Boka uye usimbise iwo nekudzvanya bhatani. Isu tinovimba muchina wedu, asi dhata dzimwe nguva inoda kubata nyoro kwevanhu.
Dhawunorodha Dhata - Tumira kunze data mbishi kuti uwedzere kuongorora pamwe neyakajairika manhamba software senge SPSS, R, kana Excel.
Boka reSolver rinoonekwa redhibhodhi rinogonesa vashandisi kuona uye kushanda nemaonero ako. Dhata inogadziriswa nekuvandudzwa sezvo iri kuunganidzwa, kuti iwe ugone kuongorora mhedzisiro chero nguva.
Kumbira Demo reGroupsolver
Tags: aichakagadzirwa njerechichivekutsvakurudza misikamusika yekutsvaga chikuvamlkugadzirisa mutauro mutauronlp